स्पेनको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकमा बार्साका पूर्वप्रशिक्षक | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
/ Tue, March 26, 2019
स्पेनको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकमा बार्साका पूर्वप्रशिक्षक
असार २५ गते, २०७५ - २१:२४
मड्रिड, २५ असार । बार्सिलोना फुटबल क्लवका पुर्व प्रमुख तथा प्रशिक्षक लुइस इन्रीक स्पेनको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेगुइलाई हटाएर लुइसलाई सोमबार उनको सट्टामा नियुक्त गरिएको हो ।
विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा अनपेक्षित असफलता भएकाले राष्ट्रिय फुटबललाई नयाँ तरिकाले अगाडी बढाउनुपर्ने भन्दै उनलाई हटाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
“लुइस इन्रीक आगामी दुई बर्षका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकमा निर्विरोध नियुक्त हुनुभएको छ,“ स्पेनी फुटबल महासंघका अध्यक्ष लुइस रुबिलेजले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने ।
लामो समय फुटबल क्षेत्रमा विताएका ४८ बर्षिय लुइसले स्पेनको फुटबल टोलीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । रूसमा भएको विश्वकप फुटबलमा स्पेन अन्तिम १६ बाटै बाहिरिएको थियो भने विश्व वरियतामा पनि ७०औं स्थानमा परेको थियो । रासस
असार २५ गते, २०७५ - २१:२४ मा प्रकाशित
बस दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते, दुई जनाको अवस्था गम्भीर
गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१३ पाँचकिलोमा आज बस दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुईको...
अख्तियारका तत्कालिन आयुक्त पाठकविरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्व विशेष अदालतमा...
हेर्नुहाेस् बिप्लवका नेपाल बन्द सहितका ‘संर्घषका कार्यक्रम’ (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले लगानी सम्मेलन केन्द्रीत आन्दोलन सुरु गरेको...
प्रचण्डद्वारा अमेरिकामा मेरिल्याण्ड राज्यको प्रदेश संसदको अवलोकन
काठमाडौं । अमेरिकामा पत्नी उपचारका लागि रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल...
राजनीतिक भेटघाटमा प्रचण्ड, एलिस वेल्ससँग विशेष छलफल
वाशिङ्टन डिसि । परिवारकाे उपचारकाे क्रममा अमेरिका रहेका नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले...
हेर्नुहोस् ढल्ने गरी हानिने झापड प्रतियोगिता, सामाजिक सञ्जालमा भयो भाइरल (भिडियो)
तपाईले आजसम्म धेरै प्रतियोगिता हेर्नुभयो होला । आज हामी यस्तो प्रतियोगिता बारे भन्दै छौं जसको बारेमा...
ग्यास सिलिण्डर पड्किँदा सिन्धुपाल्चोकमा चार जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ स्थित शिवश्री जलविद्युत् आयोजना नजिकैको खाजाघरमा...
समुद्रको बीचमा अलपत्र परेको पानीजहाज सुरक्षित रूपमा बन्दरगाहमा
इन्जिन बिग्रिएर नर्वेनजिकै समुद्रको बीचमा अलपत्र परेको एउटा पानीजहाज अन्तत: सुरक्षित रूपमा मोल्डा...
कतिवटा अण्डा खानु उचित ?
अण्डा खानु स्वास्थ्यका लागि ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा विज्ञहरूले वर्षौँदेखि बहस गर्दै आएका छन्। यसको...
गर्मी बढ्याे, आइक्रिम कत्तिकाे खानु हुन्छ ? जान्नुहाेस् यसका फाइदा र बेफाइदा
आइक्रिम विशेषगरी गर्मीे मौसममा रुचाइन्छ । चैत लागेसँगै बजारमा आइसक्रिम खानेको संख्या पनि बढ्न थालेको...
विप्लवका तमुवान संयोजक गुरुङ पक्राउ
शेयर बजारमा सामान्य सुधार
विद्यार्थीको ग्रेड घटे शिक्षक कारबाहीमा
मन्त्री यादवद्वारा डेढ दशकदेखि बन्द रहेको चिनी कारखानाको अनुगमन, दिए यस्ताे निर्देशन
दादुराबाट १४ जनाको मृत्यु, ३२ हजार भन्दा बढी प्रभावित
न्यूनदृष्टियुक्त युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा तामाङ पक्राउ
समुदाय प्रहरी साझेदारी, सात सय ५१ तहसँग सम्झौता
टेलिकमको सह–प्रवक्ताको जिम्मेवारी भण्डारीलाई
नेपाली भाषी विष्ट भाजपाको उम्मेदवार
स्टकमा धर्ना बस्न खोज्ने पक्राउ
खेलमैदानसहित पार्क बनाउन थापाले गरे जग्गा दान
प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण झन्डै ३३ हजार पुग्यो
गृह मन्त्रालयकाे सहसचिवकाे नाममा ठगी गर्ने सत्येन्द्र यादव पक्राउ